रन्जना मैनालीको अस्ट्रेलियामा अर्कै केटा रहेको खुलाशा ! एक झा’पड लगाएपछी नाठो निस्किन्छ भन्दै गर्जिए हरि उदासी – " कञ्चनजंगा News "
रन्जना मैनालीको अस्ट्रेलियामा अर्कै केटा रहेको खुलाशा ! एक झा’पड लगाएपछी नाठो निस्किन्छ भन्दै गर्जिए हरि उदासी
No Comments on रन्जना मैनालीको अस्ट्रेलियामा अर्कै केटा रहेको खुलाशा ! एक झा’पड लगाएपछी नाठो निस्किन्छ भन्दै गर्जिए हरि उदासी
चितवनमा घ*टेको रञ्जना मैनाली र उनका श्रीमान रविकान्तको घ*टना अहिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चा पाएको छ । आफूलाई भन्दा बढी माया गर्ने श्रीमतीबाट अनपेक्षित जवाफ पाएपछि बिक्षिप्त बनेका रविले कसैको सहारा नपाएपछि जीवनदेखि हार खाएर आ’त्मह’त्या गरेका थिए ।
उक्त घ*टनाले चर्चा पाईरहेको बेलामा विभिन्न व्यक्तिहरुले आफ्नो धारणा ब्यक्त गरिरहेका छन् । कोहिले रन्जनाको पक्षमा बोलिरहेका छन् भने कसैले रविलाई समर्थन गरेका छन् । यसै घ’टनाको बारेमा निर्देशक हरि उदासीले पनि आफ्ना धारणा ब्यक्त गरेका छन् । उनले रन्जना धेरै गलत देखिएको र केहि प्रतिशत रवि पनि गलत भएको बताएका छन् ।
हरि उदासीलेरन्जना पनि गलत भएको दाबि गर्दै उनलाई थ*प्पड समेत हान्नु पर्ने र वास्तविकता बाहिर आउने कुरा खुलाएका छन्। उनले रविको घरका शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै रविले घुर्क्याउन औसधि सेवन गरेको बताएका छन् । हेरौं उनले ब्यक्त गरेका कुरा भिडियोमा :
← मुकेश अम्बानी जसको ड्राइभरले नै बुझ्छन् मासिक ३ लाख २० हजार → छाउपडी हटाउन सरकारको कडा निर्देशन, नहटाए सुविधा रोकिने